Iskoolka iyo xannaannada carruurta - Krisinformation.se
TB18 Skola och barnomsorg
Waxaan halkan isugu ururineynaa macluumaad ku aaddan waxyaabaha khuseeya dugsiyada xannaannada, iskoollada iyo waxbarashada kale, iyadoo laga duulayo xaaladda xakameynta cudurrada faafa.
Dugsiyada hoose-dhexe iyo dugsiyada xannaannada
Dugsiyada hoose-dhexe iyo dugsiyada xannaannadu waa ay u sii furnaan karaan, sidii hore. Ardayda xanuunsan ee khatar cudur qaadsiin gelin karta dad kale waa in ay guriga joogaan oo aysan iskool aadin. Ardayda caafimaadka qabta ee aan lahayn calaamado cudur waa in ay iskoolka sii dhigtaan.
Macluumaadka khuseeya iskool ama dugsi xannaano oo gooni ah, kala xiriir maamulaha ama cidda iskoolka ugu sarreysa.
Haddii heerka faafinta fayruuska u sare u kaco, wuxuu qofka mas´uulka ah kaddib markii u la tashado Dhakhtarka kormeerida cudurrada faafa [smittkyddsläkare], go´aan ku gaari karaa in albaabada loo xiro dugsiga xannaanadda iyo dugsiyada.
Macluumaad dheeraad ah oo ku aaddan yareynta khatarta faafitaanka cudurka (boggu waa af-Iswiidhish)
Xeerar ku aaddan dugsiyo xannaano iyo iskoollo furnaanaya ama u baahan in la xiro (boggu waa af-Iswiidhish)
Hey’adda iskoollada su’aaleheeda iyo jawaabeheeda ku aaddan dugsiyada xannaannada, iskoollada iyo waxbarashada dadka waaweyn (boggu waa af-Iswiidhish)
Maamulka dugsiga dib uma xisaabin doono dakhliga wadajireed ee guud
Sharciga lagu mamnuucay in tiro 50 qof ka badan ay isla goob ku kulmaan, kama hirgalo goobaha dugsiyada xannaanadda iyo dugsiyada ba. Hayeeshee, mamnuucidda caaddooyin dhaqangalay awgood ayaa loo adeegsada. Inkastoo mamnuucidda noocaas ah aynan ka hirgelin dugsiyada iyo dugsiga xannaanadda, haddana Wasaaradda waxbarashada [Skolverket], waxay talo ahaan soo jeedinaysaa in sidii looga hortago ciriiriga goobaha guud, sida tusaale goobta lagu cunteeyo iyo goobaha lagu wada kulmo, in hagaajin laga hirgeliyo.
Dugsiyada sare, jaamacadaha iyo waxbarashada sare
Inti lagu jiray gugi 2020 waxay Hey’adda caafimaadka bulshadu ku talisay in dugsiyada sare, jaamacadaha, jaamacadaha xirfadaha iyo waxbarashada dadka waaweyn lagu dhigo distans. Talooyinkaas meesha waa laga saaray laga billaabo 15 Luulyo.
Deyrta waxay dugsiga sare mar kale waxbarashada ku bixin doonaan maqsinnada iskoolka. Si ciriiriga looga yareeyo gaadiidka dadweynaha waxay xukuumaddu go’aamisay in dugsiyada sare marka duruufo gaar ah ay jiraan ay isku dhex daraan distans wax ku barid iyo goob wax ku barid.
Hay`adda arrimaha caafimaadka dadwaynaha [Folkhälsomyndigheten], waxay goobaha jaamacadaha, kulliyadaha xirfadaha, kulliyadaha dadka waawayn iyo noocyada kale ee waxbarashada dadka waawayn, la xiriirisa sida goobo shaqo. Sidaas awgeed, waxay hay´adda ku talinaysa in la tixraaco qodobada sharciyada, wacyogelinta iyo talo-siinta guud ee ka hirgaleen bulsho waynta.
Distans wax ku bariddu ciriiriga ayey ka yareyneysaa gaadiidka dadweynaha (boggu waa af-Iswiidhish)
Waxaa jira siyaabo kala duduwan oo ay CSN-tu waxa wax u waafajiso aafada uu keenay feyruska cusub ee corona awgeed. Waxaa xitaa jira xeerar ammaan oo laguugu tala galay adigaa-ga dib u soo celinaya deyn waxbarasho, haddii dhaqaalahaaga ay wax gaareen oo ay kugu adagtahay in aad lacag bixisid.
Macluumaad la ururiyay oo ka socda CSN oo ku aaddan taageerada waxbarashada covid-19 awgiis (boggu waa af-Iswiidhish)
Publicerades 14 jul 2020 11:47